SSAW tuuboyinka / muquuninta steel biibiile raso / tubbooyin embriyaha
Dhuumaha birta ah ee alxanka leh waa tuubbooyin bir ah oo ka samaysan saxanno bir ah ama xarigyo bir ah oo la jeexjeexay oo la marsiiyey, guud ahaanna dhererkoodu yahay 6 mitir. Nidaamka wax soo saarka ee tuubbada birta ah waa la fudud yahay, waxsoosaarka waxsoosaarka ayaa sarreeya, noocyada iyo qeexitaanku way badan yihiin, maalgashiga qalabka ayaa yar
Saxanka birta kaarboon, xaashida birta kaarboon, birta birta birta Carbon birta waa bir bir ah oo ay ku jirto kaarboon ilaa 2.1% miisaan ahaan. Qaboojiyaha qabow ee saxanka birta kaarboon ah ee ka hooseeya 0.2-3mm, dhumucda saxanka Kaarboonka oo dhumucdiisuna tahay 4mm ilaa 115mm
Saxanka Birta ahaanta leh wuxuu leeyahay dusha sare ee jilicsan, balaastigga sare, adkaanta iyo awoodda farsamo, wuxuuna u adkaystaa daxalka asiidhyada, gaasaska alkaline, xalalka iyo warbaahinta kale. Waa bir dahaaran oo aan sahlaneyn in miridhku dhaco, laakiin gabi ahaanba ma aha miridhku.
Taarikada birta u adkaysata ayaa loola jeedaa alaabada saxanka gaarka ah ee loo adeegsado xaaladaha xirashada meelaha ballaaran. Waqtigaan la joogo, taarikada birta u adkeysata ee sida caadiga ah loo isticmaalo waa taarikada ka sameysan bir bir ah oo kaarboon hooseysa ama bir bir ah oo hooseysa oo leh adkeyn wanaagsan iyo baaxad iyadoo la adeegsanayo alxanka leh dusha qaro cayiman
Codsiga: Isticmaalka dhismaha dhuumaha laba jibbaaran, soo saarista mashiinada, mashariicda dhismaha birta, dhismaha maraakiibta, injineernimada korantada, gawaarida gawaarida, garoomada diyaaradaha, tareenada wadada, dhismaha guryaha.
Birta H-waa qayb dhaqaale oo waxtar leh oo leh qayb ka sii qaybsan qayb qayb ahaan iyo isu dheellitir culeys iyo miisaan leh oo macquul ah. Waxaa loo magacaabay sababta oo ah qaybteeda waxay la mid tahay xarafka Ingiriisiga "H".
Fasalka: 201,202,304,309,310,310S, 316,316L, 410, 420,430,904L Cabbirka: Tuubo wareegsan OD: 3-1219mm, Dhumucdiisuna: 0.1-60mm Ballaca Ballaca ： 7 × 7 -150 × 150mm, Dhumucdiisuna tahay 4 0.4 ～ 8.0mm Rectan 20 - 110 × 150, dhumucdiisuna ： 0.4 ～ 10mm Dherer joogto ah 6m, ca sida dalabkaagu u habeeyo
Biibiile bir ah oo bilaa cayn ah waa nooc ka mid ah godad dhaadheer oo wareegsan / bir laba jibbaaran, biibiile ahama wuxuu u qaybsan yahay biibiile bir ah oo aan xuduud lahayn iyo biibiile bir ah oo la alxamay. Badanaa waxaa loo isticmaalaa batroolka, warshadaha kiimikada, daaweynta caafimaadka, cuntada, warshadaha fudud, aaladda farsamada